Azo atao ve ny mividy rindran-tsavily ho an'ny fampiroboroboana milamina nefa mahomby?
Eny, azo atao tokoa ny mividy rindran-tsavoka ho an'ny fampiroboroboana mora foana nefa mbola mahomby amin'ny tranokalanao. Midika izany fa ny fomba tsara indrindra hividianana ravinkazo mora dia ny manao azy manokana. Raha ny marina, misy tetika samihafa ahafahana mijery bakalorea SEO ao anatin'ny tontolo mifandraika amin'ny fiarahamonina misy ankehitriny. Raha heverina fa mbola manan-danja kokoa noho ny hatramin'izay ny fanjakàna maoderin'ny media sosialy ankehitriny, dia manolotra soso-kevitra momba ny fifandraisana amin'ny Public Relations aho. Raha ny marina, ny PR dia manana andraikitra saro-pady amin'ny fitondrana ny solo-pahefana amin'ny fikarohana, amin'ny endriny amin'ny fampisehoana lanjany bebe kokoa izay mahatonga ny fototra tsara ho an'ny tompon'ny varotra an-tserasera. Mbola manontany tena ihany ve ianao hoe mividy rindran-damina mora vidiana na mahazo avo lenta avo lenta? Ireto misy fomba roa tena tsara indrindra amin'ny RP mba hahazoana azy ireo amin'ny tenany manokana ary tsy mandoa dolara.
Alohan'ny zavatra hafa dia tokony manandrana manokatra tranonkala manampahefana ianao na ireo mpitarika mivantana amin'ny indostrian'ny orinasa na orinasa fivarotana. Midika izany fa raha tsy misy fametahana ny fifandraisana amin'ny aterineto amin'ny aterineto. Raha ny marina, ny fampiasana PR dia mahasoa foana amin'ny fanatsarana ny fahitana ny tranonkalanao amin'ny Internet. Amin'izany fomba izany, ny pejy fandraharahanao dia azo faritana matetika amin'ny valin'ny fikaroham-bokim-pikarohana, mifanaraka amin'ny fanatsarana ny fifamoivoizana anananao amin'ny fotoana iray. Ary tokony hampiasanao fotoana vitsy amin'ny fampitàna ny media sosialy, toy ny rehefa manao fihetsika tsy misy fitsangatsanganana ianao dia manolotra ara-bakiteny ny votoatin'ny tranonkalanao amin'ny fanantenana fa ho azon'olona iray izany. Ary mazava ho azy, ny fomba fanao tsy mavitrika dia tsy miasa. Fantatsika rehetra izany. Izany no antony tokony hialanao amin'ny votoatiny miaraka amin'ny backlinks PR avy amin'ny tranonkala manan-danja miaraka amin'ny fahefana ambony indrindra, na ireo influencé mpiara-miasa akaiky anao mba hitarika ny fitarihana amin'ny fahatsiarovan-tena bebe kokoa sy ny marika mafy amin'ny orinasanao.
Na inona na inona vokatra na serivisy anananao, dia avereno dinihina ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny raharaham-barotra na ny orinasanao. Aoka ho lasa manam-pahaizana amin'ny orinasanao ianao ary hizara ny traikefanao momba ny traikefa sy ny mombamomba anao. Tadidio fa ny famerenana ny vokatra rehetra dia efa navoaka foana tamin'ny alàlan'ny backlink izay manondro ny mpanoratra na ny tranonkalany.
Fanomezana ny bilaogy tsotra na malaza amin'ny famoahana vahiny no iray amin'ireo fomba tsara indrindra mahazo ny "backlinks" mahazatra, fa tsy mieritreritra ny mividy rindrankajy mora. Noho izany, aza misalasala ny manofana fotoana vitsivitsy hanoratana ny votoaty avo lenta ary handefa hafatra fandefasana. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mivoatra ary mahita mpihaino be mpitia. Mifantoka fotsiny amin'ny tsara indrindra amin'ny fahamendrehana sy ny maha-zava-dehibe ny loharano fahatelo izay hiatrehanao izany - ary efa nanaiky ny zava-drehetra. Mariho anefa fa ny fampiasana ny votoatinao matetika amin'ny famoahana hafatra amin'ny sehatra maromaro dia miteraka foana amin'ny sazy mihatra amin'ny Google, na farafaharatsiny farafaharatsiny ny fandrosoana rehetra momba ny rohy izay efa niasa mafy.
Azonao atao koa ny mandinika ny fandraisana anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra hafa ho an'ny daholobe, ohatra amin'ny famoahana sehatra Fanontaniana & Valiny, na fanamafisana ny votoaty hita maso (toy ny sary manjavozavo na sary) ary ny fandraisana andraikitra, eo am-panaovana lozisialy momba ny kalitao ho setrin'izany Source .